सरकारले पार्टी चलाउनै पाउँदैन- चलाउन खोजेर पनि चल्दैन : नेता गौतम – Nepal Japan
नेपाली समय : 11:55:08
जापानी समय : 03:10:08
7 December, 2019 18:47 | अन्तरवार्ता | comments | 31350 Views
नेपाली राजनीतिमा वामदेव गौतमलाई एक हक्की र निडर स्वभावका नेताका रुपमा लिइन्छ । आफ्ना कतिपय विचार र अडानका कारण उहाँको जीवनमा राजनीतिक उकालीओराली सामान्य साबित भइसकेका छन् भने पार्टी एकता वा पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षका विभिन्न मोडमा नेता गौतमको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ ।
प्रणालीको सुधारमा त तपार्ल बेलाबखतममा आफ्ना धारणा त मुखरित गर्दै आउनुभएको छ, सुधार गर्नुपर्ने देख्नुभएको हो ?
–के फरक पर्‍यो त । वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न ? मैले खोजेकै हो । म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचमना भनिएको हो । २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको हो, मलाई । विसं २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ । अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपार्इं नै हो, तपाईं नै लाग्नुस् । उहाँहरुले नै भनेको हो । चुनावमा गइयो, हारियो ।
जबसम्म सम्पूर्ण जमीनको टुक्राटुक्रा समाप्त गरेर चक्लाबन्दी गरिँदैन । तबसम्म मेशिन प्रयोग गर्न सकिँदैन । जबसम्म मेशिन, मलबीउ प्रयोग पोषणयुक्त खाना बिरुवा दिन पाइँदैन । तबसम्म हामीले कुनै पनि संसारको कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनाँै । अब सरकारले सबै जमीन खरिद गर्नुपर्छ । किनकि अब जमिनदारी होइन सबै किसानको जग्गा छ । त्यो जग्गा सुन जत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सरकारले हाम्रो ३१ लाख हेक्टर जमीन ३०० देखि चारसय खर्बमा किन्न सक्छ । तीन÷चार सय खर्ब नेपाली रुपैयाँको सम्पत्तिका रुपमा हाम्रा जनतासँग रहेको छ । तर त्यो निस्क्रिय पूँजी रहेको छ । त्यो निस्क्रिय पूँजीलाई सक्रिय बनाउन सरकारले जमानी लिएर किन्नुप¥यो । सरकार किनेर आएको ३/४ सय अर्बलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्‍यो । जसको जमीन हो, यसलाई चाहिँदा बैंककाटे सुनिश्चिता दिनुप¥यो । अहिले हामीसँग ३०० अर्ब रुपैयाँ छ भने हामी गरिब हुँदैनौँ । हामी गरिबी छैनौँ । यसलाई बुद्धि पु¥याएर हाम्रो जमीन जनताको सम्पत्ति हो । जनताले रगत बगाएकोबाट किनेको सम्पत्ति हो । यो कसैबाट बिर्ता पाएको छैन । गुठीमा केही सम्पत्ति छ, त्यो देउताको नाममा रहेको छ । त्यो माटोमा रहेको सम्पत्तिलाई सक्रिय बनाएर पैसामा परिणत गर्दछौँ । कोही विदेशीले दिन्नमा भने पनि फरक पर्दैैन । हामीलाई वर्षका २० बिलियन डलर चाहिन्छ । त्यो पैसा व्यवस्थापन गर्न म सक्षम रहेको छु ।